လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: January 2012
Tuesday, January 31, 2012 စက်မှုရေးရာ
ထူးဆန်း ကွန်ပြူတာ Mouse Pads....
Tuesday, January 31, 2012 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
ဖန်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ...
Tuesday, January 31, 2012 အနုပညာလက်ရာ
အံ့ဖွယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (၂)...
Tuesday, January 31, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
အစ္စရေးနိုင်ငံက "Snake Massage"......
Monday, January 30, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
ချက်(ခ်)ရီပက်ဗလစ်နိုင်ငံက လူအရိုးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်...နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟာ တခြားဘုရားကျောင်းတွေလို မဟုတ်ဘဲ ဘာသာရေးစစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားသူတွေရဲ့အရိုးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ရှားပါး Oarfish ငါး...
ပင်လယ်ရေအနက် မီတာ ၂၀ ကနေ ၂၀၀ အကြားမှာ နေထိုင်ကျက်စားတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ရှားပါး ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်... အရှည်အားဖြင့် ၁၇ မီတာ (၅၆ ပေ) ခန့် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
Monday, January 30, 2012 ထွေရာလေးပါး
ကြံကြံဖန်ဖန် ရုံးသုံးထိုင်ခုံတွေကို စီးပြီးပြိုင်တဲ့ ပွဲ....
Sunday, January 29, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ | ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Sunday, January 29, 2012 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
Saturday, January 28, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Latvia နိုင်ငံက ဆေးရုံစတိုင်လ် စားသောက်ဆိုင်....
Come on! Ready...! Let's GO.........!!!
Saturday, January 28, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Saturday, January 28, 2012 ထွေရာလေးပါး
Friday, January 27, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Friday, January 27, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Friday, January 27, 2012 ထွေရာလေးပါး
Thursday, January 26, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Thursday, January 26, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Thursday, January 26, 2012 အနုပညာလက်ရာ
Wednesday, January 25, 2012 ထွေရာလေးပါး
အသားအရေပြားတွေကို လှီးထုတ်ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ တက်တူး....
Monday, January 23, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ | အနုပညာလက်ရာ
အံ့ဖွယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (၁).......
Monday, January 23, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Monday, January 23, 2012 ထွေရာလေးပါး
Sunday, January 22, 2012 ထွေရာလေးပါး
တခွက်ထဲမှာ ၂ မျိုး သုံးဆောင်နိုင်တဲ့2in 1 တခါသုံးစက္ကူခွက်....
Sunday, January 22, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Sunday, January 22, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
LG က ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး LG-GD900 Crystal အမျိုးအစား လက်ကိုင်ဖုန်း...
Sunday, January 22, 2012 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Saturday, January 21, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Saturday, January 21, 2012 စက်မှုရေးရာ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အပြည့်အ၀သုံးပြီး မောင်းနှင်းနိုင်တဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို Richard Gryzch ဆိုသူက တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်... ဒီဆိုင်ကယ်ကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေအိမ်နဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုပါ ရောင်ချခဲ့ရပြီး... အချိန်ကာလအားဖြင့် ၂ နှစ်ကျော် ကြာမြင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
Internet/love or hate me
Saturday, January 21, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
ထိုင်ခုံ (၁၆)ခုံပါတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်...
အချစ်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အချစ်ကိတ်မုန့်များ...
Saturday, January 21, 2012 အနုပညာလက်ရာ
Los Vegas က အံ့ဖွယ်ရေပန်းအလှ....
Saturday, January 21, 2012 ဓါတ်ပုံ
ကြံကြံဖန်ဖန် ရုံးသုံးထိုင်ခုံတွေကို စီးပြီးပြိုင်တ...
အသားအရေပြားတွေကို လှီးထုတ်ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ တက်တူး...
တခွက်ထဲမှာ ၂ မျိုး သုံးဆောင်နိုင်တဲ့2in 1 တခါသုံ...
LG က ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော ကမ္ဘာ့ပထမဆု...
ထိုင်ခုံ (၁၆)ခုံပါတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး မော်တော်ဆိုင်...
ဂရိနိုင်ငံက ၆၄.၇၅ မီတာရှည်တဲ့ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင် က...
သာမန်လူများနှင့် အနုပညာရှင်များအကြား အသက်နဲ့အရွယ် ...
Creative Body Shaving.....
လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာ...
ကြံကြံဖန်ဖန် ချိုချဉ်သကြားလုံး ကွန်ဒွန်.....
ခဲသားနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာ(၂).....
အချိန်ကြည့်ရင် ခေါင်းကိုက်စေသော နာရီများ...
စူပါမတ်ကတ်တွေမှာ ရောင်းနေတဲ့ တရုတ်ဆီးသီး(Apricot)က...
သူတို့ဆီက ထူးထူးခြားခြား အိမ်သာအမှတ်အသားများ...
ရုရှားသမတ ပူတင် စီးတဲ့လေယာဉ်...
၀ိုင်အရက်ခွက်ပေါင်း (၄၃,၀၀၀)နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပည...
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဈေးအကြီးဆုံး အရက်ပုလင်းများ...
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်း(Beijing)က အစိုးရပိုင် CCTV ဌာ...
ကမ္ဘာကျော်ဟာသ သရုပ်ဆောင် ချာလီချက်ပလင်(Charlie Chap...